ချက်တင်ကစားတဲ့ကနေအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း - ဗီဒီယိုချက်တင်ပြကစားတဲ့!
စစ်မှန်သောအခမဲ့ရောအ အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊မင်္ဂလာဆောင်၊အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ဤအနုမောရော၊မင်၊လိင်၊ချစ်ကြည်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရော။ အခုသူ။ စံချိန်တင်ဖြစ်စေလူမှုရေးကွန်ယက်တွင်၊အတွက်ဘဲ။ ဖန်တီးသင့်ပရိုဖိုင်းနှင့်ချိန်းတွေ့စတင်။ ကျနော်တို့၏လုံခြုံမှုကိုအာမခံသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်။ ကျနော်တို့မျှဝေကြဘူးသွယ်သတင်းအချက်မည်သူမဆိုအတူ၊နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျအပြည့်အဝအာမခံသင့်ရဲ့အထောက်အထား။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည်လွယ်ကူထွက်ရှာဖို့။ ကျနော်တို့သူတို့ကိုအသုံးပွုဖို့အားလုံးကိရိယာများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရှာပြီးအသက်တာတစ်ဦးလွယ်ကူသောလမ်းအတွက်။ အစဉ်အမြဲထိတွေ့နေဖို့နှင့်အတူမိုဘိုင်းဖုန်းဗားရှင်း။ အကျဥ်းအခမဲ့အလေးအနက်မေတ္တာဇာတ်လမ်းချိန်းတွေ့ဘဲ။ သင်ကစိတ်ဝင်စားဖြစ်စေခြင်းငှါအတွက်ချိန်းတွေ့:သင်လည်းအသစ်အသိအကျွမ်းတွေအားလုံးအတွက်မြို့၏ရုရှားနှင့်ကမ္ဘာအတွက်စီမံကိန်း။
ကျနော်တို့ျဖင့္ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ သင်တွေ့လိမ့်မည်အဘယ်သူသည်များစွာသောလူအဘို့အရှာကြသည်အသစ်အသက်လမ်းဖြစ်၏။ စိတ်ဝင်စားလျှင်၊တွေ့ဆုံပြီးကျွန်တော်တို့၏မေတ္တာကိုဖြစ်စေတော်မူမည်။ ပူးပေါင်းအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်အစဉ်သို့မဟုတ်။ သင့်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အသင့်ရဲ့ဧရိယာသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသာအခ်က္အလက္မ်ားျပမ်က္ႏွာျပင္မှန်တကယ်ပရိုဖိုင်း။ ကျွန်တော်တို့ ထက်ပို ၃၀၊၀၀၀၊၀၀၀။ သောင်းချီသောလူများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဆက်မပြတ်အွန်လိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာ၊ဂိမ်း၊စမ်းသပ်မှုများ၊ဒိုင်ယာ၊ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်မိုဘိုင်းဗားရှင်းများချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်စမတ်ဖုန်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများမှာလွယ်ကူသောကြည့်ရှုရန်၊ပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ ငါတို့ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအလက်တွေရဲ့လုံခြုံရေးသေချာစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ အားလုံးအစီရင်ခံစာအလွဲသုံးစားမှု၏အယူအရမ်းလေးလေးနက်နက်ဒီအပေါ်လုံးဝအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ ရှိကော်ဖီဆိုင်သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာပါဘူး။ ဒါကြောင့်နားလည်ရန်ခက်သောရည်မှန်းချက်ကိုမျှဝေဖို့ဘုံအကျိုးနှင့်အတူသူတို့အားတွေ့ဆုံရန်သောသူ။ ဒေသတွင်းနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမဖန်တီးပုလ္ဝိသို့မဟုတ်ပ်ာ္ရႊင္ျအသွင်အပြင်။ ချစ်နီး၏အိမ်နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့။ အသက်ရှင်သူသည်လူများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားပရိုဖိုင်းကနေကျွန်ုပ်တို့ချိန်းတွေ့ဒေတာဘေ့စတွင်တည်ရှိသည် ၂၀၀ ကမ္ဘာအနှံ့နိုင်ငံအပါအဝင်၊ရုရှားနှင့် ။ လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဟာအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်ဟုခေါ်သည်။ အတူနောက်လူမှတစျနေ့က၊ နက်ဖြန်နေ့ဖြစ်လိမ့်မည်ပိုကောင်း။ ကြည့်ရှုရှာဖွေရေးပုံစံကို:အမျိုးသားအမျိုးသမီးလေး:အမျိုးသမီးအထီးထီးထီး: -မော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံ။
လုနီးပါးအခမဲ့အဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊အချစ်ချိန်းတွေ့၊လူမှုရေး၊ချစ်ကြည်နှင့်အတူပူးတွဲမရှိကြိုးကိုရောတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယား။ အဘယ်သူမျှမပြန်လာရေကြောင်းအခကြေးငွေ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း-သိုဆိုက်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်အသင့်ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးပရိုဖိုင်နှင့်ရက်စွဲ။ ကျနော်တို့ကအာမခံချက်ပြည့်စုံ၏လုံခြုံရေးသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်။ သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်အနေမှလူတိုင်း၊ဒီတော့ဖြစ်လိုလျှင်သင်လုံးဝလုံခြုံ။ သိကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်နေရာဖြစ်ပါသည်လွယ်ကူသော။ ကျနော်တို့ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်အတူအားလုံးလိုအပ်သည့်ကိရိယာနှင့်ရည်ညွှန်းသောပစ္စည်းများ။ အမြဲတမ်းရှိပါတယ်တစ်ခုလက်ကိုင်ဖုန်းဗားရှင်းဆိုက်၏အကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါ။ မေတ္တာသည်မှတ်ပုံတင်မပါဘဲပင်အနက်ထားချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်ဓာတ်ငွေ့ဓာတ်ရစေ:ဘော်လ် ၊ငွေနွေဦး၊၊ဟုရွာ၊ သင်ကသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အရသိကျွမ်းနှင့်အတူစီမံကိန်းအတွက်အပေါင်းတို့သည်မြို့ကြီးများ၏ရုရှားနှင့်ကမ္ဘာ။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဒီချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အကောင်းဆုံးမြို့၌ဒိန်းမတ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအဘို့ရှာကြသည်လျှင်ကိုချစ်သို့မဟုတ်တောင်မှကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ကျွန်တော်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကြေညာချက်များအစည်းအဝေး၏၊မသာအတြက္။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးချိန်းတွေ့။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ ချိန်းတွေ့မင်္ဂလာပါ။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏ကမ္ဘာချိန်းတွေ့၊ဆက်သွယ်ရေး၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊နှင့်မျှော်လင့်။ အခမဲ့တက်လက်မှတ်ထိုးဘို့အချိန်းတွေ့နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့သင်တွေ့လိမ့်မည်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဒုတိယတစ်ဝက်၊သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဖိတ်ကြားမှညဦးယံဖြုန်းနှင့်အတူတစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်လူတစ်ဦးအတွက်သို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဆင်းလှသောအရပ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်ဂုဏ်ယူကြောင်းကျေးဇူးတင်စကားမှကျွန်ုပ်တို့ချိန်းတွေ့ဆိုက်လူမျိုး၏ထောင်ပေါင်းများစွာရှိသူများကဖန်တီးတစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစုဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ် တွေ့ဆုံစစ်မှန်သောသူငယ်ချင်းများ၊နှင့်ယနေ့သင်ပူးပေါင်းနိုင်ပါပြီးအပေါ်။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အခုဆိုရင်သင်ရှိသည်ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းရှာတွေ့ဖို့သင်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်၊ရိုးရိုးမေးခွန်းကိုဖြေသငျသညျအဘယျသို့ခငျြဘူး? အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုလွယ်ကူ၊ဆက်သွယ်ရေး၊သို့မဟုတ်သင်ချင်တဲ့အကြောင်းရောက်ကြည့်ရှုခြင်းငှါထိုမြို့သို့ရောက်သောသင်တို့အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့မက်မက်၊မှသာလျှင်အသင်စောင့်ဆိုင်းနေတစ်စုံတစ်ဦးအဘို့အဆင်သင့်အပေါင်းတို့သည်ထိုထုတ်ဖေါ်ဖို့ကိုအမည်မသိလျှို့ဝှက်ချက်များကိုသင်ရပ်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရပ်၊ဤသူကားသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ဦးချိန်းတွေ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ၊ဒါမှမဟုတ်သင်အလေးတချို့ကိုမေးချင်ပါတယ်အဘယျသို့အတူရာသီဥတု? ကြည့်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖို့အများအပြားပူဇော်နိုင်ပါတယ်သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဆိုက်ချိန်းတွေ့ချိန်းတွေ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်အားလုံးမဟုတ်လူအနိုင်ချက်ချင်းစတင်စကားပြောနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏နှင့်အကဒီမှာကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်လာရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်အကူအညီ၊ကျွမ်းကျင်သူအကြံဥာဏ်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်သိကောင်းစရာများဆောင်းပါးနှင့်နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုပေးမည်သင်ရွေးချယ်စရာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကူညီဖို့စတင်သင့်စကားပြောဆိုသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်ရှာတွေ့ ဖန်စီနေ့စွဲသို့မဟုတ်အနေနဲ့သီးသန့်ဆုလက်ဆောင်။ အောင်ကျွမ်းပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူနေထိုင်သူများ၏မြို့နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မူထူးခြားတဲ့အလှန်မြေပုံ၏အပရိုဖိုင်းနှင့်သင်ယူနေ့တိုင်းအသစ်တစ်ခုခုအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်ချိန်းတွေ့ချင်တယ်ဒါဟာမသာမန်အာရုံ၏ငြိမ်ဝပ်၏ဆက်သွယ်ရေးများနှင့်နောက်ဆုံးသင်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာ၊ထိုအခါမှတ်ပုံတင်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်နှင့်အမြင်အသုံးပြုသူများရှယ်ယာဓါတ်ပုံများသူတို့၏မှတ်ချက်များနှင့်တွေ့ကြုံေပးပါဂရုဏာ၊စီစဉ်မှုများ၊အတွက်ပါဝင်ပြိုင်ပွဲနှင့်ရာထူးရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်ကျနော်တို့သေချာအောင်သင့်ရဲ့နေ့တိုင်းပြည့်စုံနှင့်အတူမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံ၊ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ချစ်ခြင်းအပေါ်ချိန်းတွေ့။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်၊နောပြည်နယ်။ အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့များအကြားရေပန်းစားသည်င္ငံျခားသားမ်ားအပေါ်အမေရိကန်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ အများအားဖြင့်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါရွေးရက်စွဲတစ်ခုရှိသည်ကြောင့်၊သူတို့ပိုပြီးလေးနက်သောဆက်ဆံရေးနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားနှင့်မိသားစုများနှင့်ကိုက်ညီသောသူတို့၏အသက်အရွယ်။ သင်သွားဖို့ဆိုက်နှင့်ထွက်ရှာတွေ့မှအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအနေဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါ။ ဒီဆိုက်တွင်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်လက်ထပ်ဖို့အလုပ္လုပ္ခြနိုင်သူအတွေ့အကြုံကိုများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူလက်ထပ်ပြီးနိုင်ငံခြား။ သူကအံ့သြဖွယ်အနှင့်အဆင်ပြေ။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အတည်ပြုများ၏ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အစပျိုး"စကားပြောခန်းနှင့်ချက်တင်နှင့်အတူအဆွေခင်ပွန်းနှင့်အမျိုးသားများ၏မြို့အတွက် (ဒေသနှင့်ကန့်သတ်ဧရိယာ။ သာ ၊ကောင်းသောအရာမကွန်ရက်များအတွက်ကလေးများနှင့်အတူအနိမ့်အဆင့်ပညာရေး၏။ မရှိကန့်သတ်အရေအတွက်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများအတွက်ဆက်သွယ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာနှင့်အတူအတုအကောင့်အသစ်များ၏။ သင်သည်ဤသုံးနိုင်သည်ဆိုက်မှအခြားလူများနှင့်တွေ့ဆုံ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုက်ပေါ်တွင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အတည်ပြုများ၏ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ခေါင်"ချိန်းတွေ့နှင့်အမျိုးသားများ၏မြို့အတွက် (ကန့်သတ်အ ဒေသနှင့်ဆက်သွယ်ရေးစကားပြောနှင့်ဒေသ။
မှတ်ပုံတင်အခုဆိုရင်အခမဲ့များအတွက်ဘဲနဲ့တာဝန်ဝတ္တရားအပေါ်အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဂျုံး"။ ကြည့်ရန်ဓါတ်ပုံများထည့်ပါဝမည္။ ဒီဖုန်းနံပါတ်ဆိုဒ်ကမ်းလှမ်းချက်အသစ်အလမ်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အသစ်အသိအကျွမ်းတွေအားဖြင့်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ခွဲဝေခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှု။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်မှတ်ပုံတင်အခမဲ့၊ဓါတ်ပုံမပါဘဲ၊ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်လုံခြုံရေးအရာဝတ္ထုမဟုတ်နိုင်နှင့်တွေ့ဆုံ။ သာ ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်ဓာတ်ပုံ၊ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများမရွိလုံခြုံရေးမှမနိုင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခမဲ့။ ဆိုက် ၁၀၀ အခမဲ့(မွတ္ပံု)နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအပေါ်ရရှိနိုင်သောဆိုက်၊နေ့တိုင်းရှိတယ်အသစ်အစည်းအဝေးနှင့်သင်တန်းသားများအနေဖြင့်အသိုက်အဝန်းအသိအကျွမ်း။ ယနေ့သင်သုံးနိုင်သည်"အကြိုက်ဆုံး"-ဤသည်၏ဖုန်းနံပါတ်မိန်းကလေးနဲ့ကောင်လေးအတွက်ဓာတ်ပုံခဲ့သောလည်းမည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်ဒီမှာနှိပ်ပါ။
မျက်စိကန်းသောရက်စွဲနှင့်အစာရှောင်ချိန်းတွေ့အခွင့်အလမ်းကိုပေးဖြည့်ဆည်းဖို့အလွန်ကြီးစွာသောတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌တစ်သဘော။ နှိုင်းယှဉ်နှင့်အတူ၊အခြားနိုင်ငံများကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကျေးဇူးပြုပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံများအတွက်ကောင်းတစ်ခုရွေးချယ်ရေး၏ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုတည်း။ နှင့်အပင်၏အပြင်ဘက်တွင်၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်-နေ့နှင့်ပတ်သက် ၊ဒါကြောင့်အများစုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၊ပိုပြီး! အ ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ပါဝင်မှု:ကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်၊ဒါကြောင့်ပျော်မွေ့လျက်မကျင့်မည်အပူတပြင်းရှာဖွေရန်တစ်ဖက်! မြန်နှုန်းရောနှင့် တို့ပေါင်းစပ်အချို့အချိန်နှင့်ရှယ်ယာတစ်ဘုံ။ ထိုကတည်းက၊အမြန်နှုန်းရော၊သတင်းစာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားပူဇော်သက္ကာပြီလူသိများ။ သာဆွစ်မြို့ကြီး၊အဖြစ်၌၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပုံမှန်မြန်နှုန်းမြင့်ရော။ ကြ သင်အမြဲပြောပြရန်ရှိသည်၊လူတိုင်းအတွက်စံချိန်တင်။ အမှုအတွက်အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားအတွက်လက်ခံအသေးစိတ်အချက်အလက်အကြောင်းသင်၏နောက်အစည်းအစည်းအဝေးအင်တာနက်ကနေတဆင့်သို့မဟုတ်ဖုန်းဖြင့်၊အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အချက်၏"အကြိုက်ဆုံး"။ ပျော်စရာတက်ဘလက်ႏွင့္စာ နှင့်အခွင့်အလမ်းများအတွက်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွား၊သင့်လျော်သောနှင့်စားစရာဘို့ခေါင်း! တစ်ခုသဘောပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်၊သင်တွေ့လိမ့်မည်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှရာပေါင်းများစွာ၏အဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားအပရိုဖိုင်း။ စားပွဲ၌ထိုင်လျက်၊အသုံးအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ။ အဆာလ်သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အစီစဉ်သူများ၏အပျက်တစ်လျှောက်လုံးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအနေဖြင့်အမြို့မြို့-မြန်ချိန်းတွေ့အတွက်ကြီးမားသောဖွဲ့စည်း။ တစ်မိနစ်အတွက်အရှည်စည်းချက်၊"အမြန်နှုန်းကိုစုစည်းထားသောပုံစံ"လည်းအပြောင်းအလဲ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဇာတ်ခင်းသို့ဝင်၊ ရဲ့နှလုံးခုန်အသွယ်အသေးစိတ်။ အချို့သောအချိန်များ၊အစေးနှင့်ဆာလ်အွန်လိုင်းပူဇော်သက္ကာဘို့သိရသည်မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့! အကောင့်ဖန်တီးတစ်ဦးအပိုဆောင်း။ ပိုပြီးဖတ်ပါဒီအတွက်လာမယ့်အစီရင်ခံ။ မှာကြည့်ပြက္ခဒိန်တွင်ဆိုက်၊အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီရက်စွဲများ ဖစ္အပ်က္မ်ား၊ဓါတ္ပံုမ်ားကို၏လှပသောနေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအသက်အရွယ်အုပ်စုများ။ ဒါဟာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊အဆိုပါကမ်းလှမ်းချက်ကိုအသုံးျအဆက်မပြတ်များအတွက်အခြားအဆင့်မြင့်တစ်ဦးတစ်ဖြစ်ရပ်များ(လေ့လာရေး၊ချိန်းတွေ့။) ဒီမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့ပံ့ပိုးပေးဟုခေါ်သည်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဘားကြောင့်မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့ပံ့ပိုးပေးတွေ့အရက်ဆိုင်များအတွက်ဆွစ်မြို့ကြီးများအကြိမ်ပေါင်းများစွာအလုပ္။ အရင်ကဆိုရင်များအတွက်စိုးမိုးရေးသည်:"အရေအတွက်ကို။"ရှိပါတယ်နှစ်ခုအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်စုဝေးမှာဘား၊အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသည့်အခါ။ ဒါေၾကာင့္ေရာင္းလိုုအားယေဘုယျအားဖြင့်အတော်လေးလူငယ်၊လူငယ်နှင့်အနည်းငယ်၊အစောပိုင်း ၁၉၄၀ ခုနှစ်။ အဆိုပါရှင်းလင်းပွဲဘားနှင့်အတူနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်သင်တန်းသားများခန့်ကြာပြီးတစ်နာရီနှင့်အစွန်းနှင့်အတူအဆင်ပြေပြုစုပျိုးထောင်၏မျက်မှန်အတွက်။ အဲဒီအပြင်အလွန်ကြီးစွာသောမျက်စိကန်းရက်စွဲများ-မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့အေဂျင်စီတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ရှာဘို့အအချို့သောအခြားသူများအကြောင်းကျွန်တော်သတိပြုမိကြပြီကတည်းက။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အေဂျင်စုစည်းအတွက်သူတို့၏မြို့ကို၊အထူးသဖြင့်အများအပြားနှင့် အလားတူဖြစ်ရပ်များအတွက်တစ်ဦးတစ်? မေတ္တာဖွဲ့တွေကမ်းလှမ်း၏တစ်ဦးရောနှောအွန်လိုင်းနှင့်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်"စစ်မှန်သောအသက်"အတွက်၊၊၊ နှင့် ရဟန်း ။ အတိတ်အတွက်၊အပူဇော်ခဲ့သည်၊၏အခါသမယအပေါ်အပျက်အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တစ်ကိုယ်တော်ပန်းချီ၊တောင်တက်၊ ဆွေးနွေးပွဲတည်း။ လောလောဆယ်၊ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချ၊ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကို-ချွတ်၊အဓိကအားဖြင့်တစ်ချွတ်ဖြစ်အပျက်အပေါ်။ သို့သော်၊ထိုပရောသင်တန်းများမှာ ရဟန်းဆဲအောင်မြင်မှု-သူတို့မှန်မှန်ကျင်းပကြသည်နှင့်အစဉ်အတွက်တစ်ဦးလျင်။ ရက်စွဲယောက်သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့ပံ့ပိုးပေး။ ဖြစ်ရပ်များ၌ကျင်းပကြသည်၊အမြဲအတွက်ကြီးမားတဲ့ဘား၏သတိထားပါ။ တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊အစာရှောင်ခြင်းရက်စွဲများအာမခံထားပါသည်။ အဆိုပါမေးခွန်းအတွက်ရက်စွဲယောက်ရှိ၏မြန်ဆန်လွယ်ကူသည်၊အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်အမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့အတွက်ဆက်လက်။ အပျက်ပြီးနောက်၊သင်တန်းသားများကိုချိန်ရှိသည်တွေ့ဆုံရန်အခြားဧည့်သည်ဘားမှာ၊ဆက်လက်ဆောင်ကြဉ်းတစ်ဦးကော့တေးခံစားကြည့်ပါ။ ချိန်းတွေ့နှင့်ဆိုင်ကယ်စီးနင်း နှင်းလျှောလည်းများ၏ဆောင်ပုဒ်အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီအစဉ်၏ဆာ္ႏစွယ်စုံကျမ်း၊အမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့အတွက်လျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၏ ရစ္က အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ပရဒိသု၏။ အစည်းအဝေးအမှတ်အတာင္ၾကီး၏ဓါတ္ေ သာ ၊တစ်ကီလိုမီတာကွာဝေး(က)အေရွ၏။ ဒီနေရာမှာသင်ကြားဖြည့်ဆည်းရွေးချယ်ထားတဲ့အခါလျှောပြေး(အမျိုးအစားကနေဒီဇင်ဘာလမှမတ်လရဲ့အဆုံး)များအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်အစည်းအဝေးတွင်အ ။ နှင့်အတူလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်၊ကော်ဖီ၊ေျမြည်းနှင့်နေ့လယ်စာမှာအထက်။ အဆိုပါကောင်တာဓာတ်လှေကားမှာလည်ပတ်အားလုံးရာသီဥတုအခြေအနေပေး၊အစားအဆိုပါဓာတ်လှေကားဖြစ်ပါတယ်။ ညစာကမ်းလှမ်းပုံမှန် ညစာစားပြဲႏွနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာနေဖို့လည်းအပျက်အတွက်၊၏အစိတ်အပိုင်းညဦးမည်ပင်အတွက်နေရာယူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်။ ဖန်တီးမှုနိဒါန်းနှင့်အတူမီးဖိုချောင်နှင့်ပျော်စရာ။ ဖြစ်ရပ်များအလောလောဆယ်တွင်ယူပြီးနေကြတယ်အရပ်ဌာန၌ဘေ၊။ ၊၊ရှုနှင့် ။ ဤအအမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့ကျွမ်းကျင်သူများပဲဓာတ်ငွေ့ မှစတင်:အတွက်အသုံးဆွစ်မြို့ လူကြိုက်များ ကျင်းပကြသည်အတွက်လေထုသန့်စင်။ အသီးအသီးဖြစ်ရပ်အဖြစ်ကျင်းပခဲ့တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်မှုအဘို့တိကျတဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုများ။ တစ်ဦးကောင်းပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအရပ်တို့ကိုပူဇော်ကွီးစှာဖျော်ဖြေရေးနှင့်ရော။ ယူဒီမှာကြည့်ပါ:တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုကြောင်းပြသမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့ပူဇော်ပွဲအတွက်အဖက်ပြန်လည်အမှတူညီသောအမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့နောက်ဆုံးရောအစီအစဉ်။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်အတိုအစည်းအဝေးမိတ်ဖက်။ တစ်ခုတည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ဝက်အူ၏မျှော်လင့်ချက်များအတွက်။ အပြားအတွက်မျှော်လင့်ချက်ပျက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊မျက်စိကန်းနေ့စွဲသို့မဟုတ်အမြန်နှုန်းရက်စွဲ၊ကြီးစွာသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ပြီးတော့အချို့အရေးတင်းမာမှု၊၌၏ဝိညာဉ်ကိုကြုံတွေ့ခံစား၊နှင့်အဘယ်သို့သောအကြောင်းမေ့လျော့တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်:အစည်းအဝေး၏၊စကားပြော၊နှင့်၊နောက်တဖန်အ၊အနည်းငယ်ရော။ တကယ်တော့၊ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုလက်တဆုပ်စာ၏"ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ"၊ဖြစ်ကောင်းသက်အရွယ်နှင့်အကျိုးတို့၏အထက်၊သင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်စောင့်ဆိုင်းနေသာမင်းသား၏စူပါစိတ်ကူး၊ပြောင်းပြန်သို့မဟုတ်မဟုတ်။ အဖြစ်အပျက်အစဉ်အမြဲအဖြစ်အများကြီးပျော်စရာဖြစ်မျိုးစုံတီစားသုံးမှု! ဒါကလက်ျာရဲ့! ဒံယေ တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခုတွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့်မီဒီယာအဖြစ်ဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်သူအရာမရွိပါ။ စမ်းသပ်မှုအမျိုးအစား' မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့စာေမးပြဲမုခ်များမှာလစဉ်ရေးသားသည်။
အမ္ိဳနှင့်သပိတ်ရှရပင်၊အေးမြသောရေကန်နှင့်အေးအေးဆေးဆေးမြစ်များ၊ နှင့်အောင်း ဒိန်းမတ်စိတ်ဝိညာဉ်၏ထိုကဲ့သို့သောသဘာ၏င္ပါ။ နှင့်အသံတိတ်၊ဒါပေမယ့်အမျိုးနှင့်ပြည့်စုံ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ။ ငါ့အိပ်မက်ကိုပျက်ပြယ်ဖို့၏နက်နဲသောအရာဒိန်းဝိညာဉ်?"ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့"။ စတင်ချိန်းတွေ့အတွက်ဒိန်းမတ်၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်ရန်အပေါ်။ ဒါဟာအခမဲ့ဖွင့်နှင့်ထက်လျော့နည်းကြာ။ မှတ်ပုံတင်မည်ဖို့လက်လှမ်းပေးဖို့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ:သင်စောင့်ရှောက်နိုင်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖြစ်၊ကြည့်ရှုဖို့အသုံးပြုသူရဲ့ဓါတ်ပုံ၊မှတ်ချက်များထားခဲ့၊မက်ဆေ့ခ်ျများရေးဖို့အတွက်ပုဂ္ဂလိကစကားပြော။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာက"ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့"အစည်းအဝေးနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးစကားပြောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးဒိန္း။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဗီဒီယိုအဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊သင်တစ်ဦးသည်ရှာဖွေခြင်းနေတယ်ဆိုရင်၊အပင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ကျွန်တော်တို့ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်လုံးအခမဲ့၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကြေညာချက်များအစည်းအဝေး၏၊မသာအတြက္။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်များအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး-ဗီဒီယိုချက်တင်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးစကားပြောမပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊အကျိန်ကိုအကြောင်းကြားအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်ပါသည်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးစကားပြောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့ကူညီပေးခဲ့လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှာတွေ့ဖို့အသီးအသီးအခြားနှင့်ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်၏မေတ္တာ၊ထို့နောက်သင်သည်ကျိန်းသေသင့်အာရုံစိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးစကားပြောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့။ ဤအတွက်သင်လိုအပ်အသွားအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ထွက်တဲ့ပုံစံအဘယ်မှာရှိသင်သတ်မှတ်ချက်အလက်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်။ ပြီးနောက်၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူမည်သည့်အသုံးပြုသူ၏ချိန်းတွေ့ဆိုက် အရာတူ၊၊သင်လိုချင်မှလူသစ်ဖြည့်ဆည်း။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ။ ငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများသင်ပြသ၏အကောင်းဆုံးဘက်ပြသသည်သူ၏စကားမှန်သဘောသဘာဝ။ မကြာခဏလူအရှက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အမှန်တကယ်အသက်တာ၌၊နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမအောင်မြင်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များ၊ဤအမှုအရာနှောင့်ယှက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊သင်အောင်မြင်ဘာလိုချင်။ အစဉ်အမြဲသုံးစွဲရန်ရှိသမျှအခွင့်အပျော်ရွှင်မှုကိုရရောက်စေဖို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များ၊အလှည့်အတွက်၊သင်ပေးသည်တဲ့အကြီးအခွင့်အလမ်းမှဖြည့်ဆည်းသင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်အခုအချိန်မှာ။ အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာချိန်းတွေ့ဆိုက်ယူလိမ့်မည်မိနစ်နှင့်သင်ပြုထားရန်လိုအပ်မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုသို့မဟုတ်အထူးကျွမ်းကျင်မှု။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးစကားပြောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများဗီဒီယိုစကားပြောခန်း ချိန်းတွေ့ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုချက်တင်ၾကာင္းဗီဒီယိုစကားပြောခန်း။ ရုံဖြည့်စွက်သင့်ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်တွင်အဆိုပါဗီဒီယိုဝက်ဘ်ဆိုက်ချိန်းတွေ့အကြီးဆုံးဖြစ်နိုင်သောပမာဏ၏သတင်းအချက်အသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်။ တင်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံနှင့်သင်ထို့နောက်အောင်မြင်မှုဆိုက်ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊သင်အာမခံချက်။ ချက်တင်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအတွက်ဘုံအကျိုးစီးပွားနှင့်ဘုံမြေပြင်များ။ သင်အကယ်စင်စစ်ရှာဖွေသူတစ်ဦးသိမှရချင်တယ်။ သင်ခံစားရလျှင်သင်ရှိသည်သောချော်အချို့မျိုးပွားလိုအပ်သည်ဆကျသှယျဖို့ဆက်လက်နှင့်အတူသူ့ကိုစစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ချက်တင်ချိန်းတွေ့၊အတူတူအချိန်ဖြုန်းဖို့တစ်နေရာရာမှာနွေးထွေးလေထု။ ချိန်းတွေ့ယိုစကားပြောခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲသင်အဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်ပန်းခြံထဲတွင်လမ်းလျှောက်၊ခံစားကောင်းတဲ့ရာသီဥတုနှင့်သဘာဝ၊သငျသညျမှနျသှားနိုငျမှာညစာတစ်ဦးကဖီးသို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်၊သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ပြဇာတ်ရုံရုပ်ရှင်ရုံ။ ဒါဟာအားလုံးအပေါ်မူတည်သင့်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပါ။ မဆိုအမှု၌၊သင်တွေ့လိမ့်မည်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါ်ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဗီဒီယို အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ မှတ်ပုံတင်အခမဲ့အဘို့ငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုချက်တင်ၾကာင္းအခုရှာနေစတင်။ သင်တော့နောင်အကြောင်းသင်မသုံးခင်က။ သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်အပေါ်သင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ယူကူျသို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လက်နဲ့ဖန်တီးသင့်ကံကြမ္မာကိုအဘို့ကိုယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ယိုစကားပြောခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲသင်ကူညီနိုင်ပါ။
ကျနော်တို့ကတိပေးျဖင့္ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအဘို့အသင့်ငြီးငွေ့ပဳႏိုင္ရန္အတွေ့အကြုံ။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်တစ်ဦးအသစ်နည်းလမ်းရှာဖွေနေ၊သင်လိုအပ်အဘို့အကြည့်ဖို့နည်းလမ်းအသစ်ရှာမှာပါ။ အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်ကအချိန်ဖြုန်းနှင့်အတူအခြားလူများနှင့်ဖန်တီးခြင်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝ၊သင့်ဆက်သွယ်သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုနှင့်ဒေသခံလူမှုအသိုင်း။ သင့်ရဲ့ချစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အများကြီးပိုမြန်။ တက်လက်မှတ်ထိုးဘို့အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များအစဉ်အဆက်။ သင့်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အသင့်ရဲ့ဧရိယာသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်စစ်ဆေးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်စစ်မှန်သောပရိုဖိုင်းသာ။ ကျနော်တို့ထက်ပိုရှိသည်အသုံးပြုသူများ ၃၀၊၀၀၀၊၀၀၀ ပရိုဖိုင်း။ သောင်းချီသောလူများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဆက်မပြတ်အွန်လိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာ၊ဂိမ်း၊စမ်းသပ်မှုများ၊ဒိုင်ယာ၊ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊နှင့်မိုဘိုင်းဗားရှင်းများချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်စမတ်ဖုန်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများမှာလွယ်ကူသောကြည့်ရှုရန်၊ပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ ငါတို့ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအလက်တွေရဲ့လုံခြုံရေးသေချာစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ အားလုံးအစီရင်ခံစာအလွဲသုံးစားမှု၏အယူအရမ်းလေးလေးနက်နက်ဒီအပေါ်လုံးဝအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ သင်ဒေသခံကော်ဖီဆိုင်ပါဘူး။ တစ်ဦးကောင်းစိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အမေးအဝှမ်းဒေသထွက်ရှာဖို့ဆိုရင်အမျိုးသားပစ်မှတ်ထားနေသောအမျိုးသမီးများအနီးရှိသင်ဘယ်မှာနေထိုင်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့။ အသက်ရှင်သူသည်လူများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားပရိုဖိုင်းကနေကျွန်ုပ်တို့ချိန်းတွေ့ဒေတာဘေ့စတွင်တည်ရှိသည် ၂၀၀ ကမ္ဘာအနှံ့နိုင်ငံအပါအဝင်၊ရုရှားနှင့် ။ ငါလက်ရှိတွင်အလုပ်အပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ တစျနေ့ဖြစ်လိမ့်မည်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ၊နက်ဖြန်နေ့သင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
ချိန်းတွေ့မျိုးသမီးတစ်ဦး-ကေလး၊ ဦးဆောင်များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အင်တာနက်။ အားဖြင့်ချိန်းတွေ့နှင့်သှေးဆောငျ၊အင်တာနက်ကိုလည်းဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းအဘို့အခိုင်မိသားစုအနာဂတ်။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊၅၈၍ကွာရှင်းသို့မဟုတ်လက်ထပ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်ပါ။ မျှော်လင့်ကစားရန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ယခုအဟ။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်သင်ကူညီလိမ့်မည်အတွင်း ၊အရာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုခိုင်ခံ့စေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။ ဒီဆိုက်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏တာဝန်ခံအခမဲ့မည်သူမဆိုများအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့အကဲဖြတ်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့၊အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်သစ်ခွများ၊ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအပေါ် ထိုဆိုက်တာဝန်ခံအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးသည်နှင့်အညီစည်းမျဉ်းကြောင်းမရနိုငျခက်ခဲသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဆက်ဆံရေးအတွက်။ တိုင်းကျွမ်း၊ရှိသမျှအခြေအနေထူးခြားသည်။ ရေးဖို့အတွက်ဒီသင်တန်း"နှင့်"ဒီမှာအဘယ်သို့အဖြစ်။"အတွက်အောင်မြင်သောချိန်းတွေ့၊သင်သာလိုအပ်ပါတယ်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမထည့်သွင်းဌာနလက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်ထို့ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာမဟုတ်။ အဘယ်သူမျှမ"အ"သို့မဟုတ်"ယုတ်"နေရာသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။ အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအရာတစုံတခုတစ်ခုအဖြစ်"ကောင်းသော"သို့မဟုတ်"ဆိုးသော"စကားလုံး။ ကျနော်တို့များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင့်ထူးခြားသောဖြိုးအပေါ်နေ့အခြေခံ၊နှင့်ကျွန်တော်ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပေါ်မှီခိုအားထားသူမ၏ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်အသက်ရှူသည့်အခါ။ အဘယျသို့အပေါ်မူတည်ယခုသူမအကျင့်မည်မဟုတ်။ သို့သော်၊ချိန်းတွေ့အောင်မြင်မှုအာမခံချက်မပေး။ ဒါဟာသင်ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်ဖို့ပျက်ကွက်နှင့်အချပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ငါသည်မသိရပါဘူး။ ဤသည်၏အနုပညာအကင်းမာစတာ။ သင်လိုအပ်မှထွက်သွားနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အဘို့မည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်အရာတစ်ခုခုပြု။ ဒါဟာပြီးသားတစ်ဝက်ပြု။ မစတိုးဆိုင်အတွက် လုပ်-ယုံကြည်အဖြစ်၊ထုတ်ကုန်တံဆိပ်သည်မလွန်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်နှင့်အကူအညီဖတ်ရှုဖို့။ သူအမျိုးသမီးကီပီးဒီနားထိုက်၏။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ဖို့အပေါ်မြင်။ ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်သို့မဟုတ်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီအစစ်အမှန်စိတ်ပညာအကြောင်းဖော်ပြလိုလူတွေ။ ဤသည်နောက်အဆင့်။ ဟုတ်ကဲ့၊ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်း။ အဘယ်သူမျှမ။"စုဆောင်းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံမီးကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်အမျိုးသားများစိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါအတွက်၊စသည်တို့ကို။"သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအထိစောင့်ဖို့ရှိသည်မိန်းကလေးရဲ့သာဖုန္းနံပါတ္။ ဖုန္းေခၚမည္။ ဤသည်သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေးမှအရာအားလုံးကိုတစ်ရာအရပျ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်အကြောင်း။ အမျိုးသမီးဖတ်ပြီးစပ်စုများမှာ။ ဒါဟာအတို၊ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်၊ငါတို့သည်သာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အတူကူညီ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိုလျှင်၊ခေါ်ဆိုခသို့မဟုတ်ရေးဖို့။ သင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်ဖြစ်ရန်ဖိအားပေးခံရ။ ညွှန်ပြနေကြောင်းအောက်ပါဤအဓိပ္ပါယ်။ ထိုသို့မထင်ပါဘူး။ ကောင်းပြီ၊ကြည့်ရအောင်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကရှင်းလင်းရန်မိန်းကလေးများ၏အကြံအစည်။ မိန်းကလေးများမဟုတ်ကဗျာဆန်သို့မဟုတ်ရေ။ အမှန်တကယ်၊တိုင်းမိန်းကလေးလက်ထပ်ဖို့လိုလားနေတဲ့အချို့သောအရာ၊အလေး။ ငါသည်ယုံကြည်သောအားဖြင့်ဖြည့်စွက်ကို"စီးရီး"၊အဆိုပါရည်မှန်းချက်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည်ကားအဘယ်သို့။ အခါပိုက်ဆံချေးကနေလူအတော်များများ၊သင်အမြဲလိုပြပွဲတွေအများကြီး၏အသိအကျွမ်း။ တစ်ဦးစကားပြောဆိုကြောင်းအကြုံ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်၎င်းတို့၏နေအိမ်(နံရံ၊မာ္ေတာ္ကားမ်ား၊စသည်တို့ကို။)၊ နေချိန်တွင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဘယ်သူမျှမနေပါစေမည်သို့စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ယခုတိုးမြှင့်စေမည်။ ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့မိန်းကလေးကိုသိသူဤပုဂ္ဂိုလ်သည်သာ။ ဤအကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်မမြဲပေါ်ပေါက်သောကြောင့်၊အလုပ္အကိုင္အမြဲမရှင်းလင်းသည်၊ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်သင်အာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်မှသူမ၏ဆံထုံး(မျက်စိကို၊ပုံ၊အသံ)။ မိန်းမတို့အဘို့၊ဒီအအတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်အကိုက်ညီ၊ဒါပေမယ့်ငါနှင့်အတူသဘောတူဘုရားသခင်ရဲ့တားမြစ်။ နောက်ဆုံးနှင့်အောင်မြင်မှုအာမခံချက်။ တစ်ပျော်စရာရှိသည်။
တစ်ကိုးကားအတွက်လမ်းညွှန်အားလံုးဆွစ်ဇာလန်အချက်အလက်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ။ အတူတူ၊ကျနော်တို့မြှင့်တင်ဆွစ်ဇာလန်က်န္းမာေ။ ဒီနေရာမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာသယံဇာတကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပိုပြီးမျှဝေသိပညာ၊မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်များ၊ရေး၊ဖတ်၊တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊နှင့်ဤသို့အနေအပေါ်ကောက်ဝတ်။ ပထမဦးဆုံးအလုပ်မှဘွဲ့ရပြီးနောက်တက္ကသိုလ်သို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်အလုပ်၏အတွေ့အကြုံအသစ်တခုအလုပ်ရှင်? ဒီနေရာမှာသင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေများအတွက်အရည်အချင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုထမ်း? ကျွန်မဒီမှာသင့်ကုမ္ပဏီအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ ကျနော်တို့မှန်မှန်အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာကျောင်းသား၊ဝန်ထမ်းနှင့်အလုပ်ရှင်ဆွေးနွေးနိုင်ရေးကိစ္စများမှာအတူတူစားပွဲနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့အလုပ်၏နေရာအရပ်နှင့်အချိုးများအတွက်သေးငယ်တဲ့ပမာဏ၏အချိန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လူမှုကွန်ယက်။ အပစ်မှတ်ပရိသတ်ကို။ တိုင်းကုမ္ပဏီအမှန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးဖို့ပြင်မိမိတို့တာဝန်ခံအခမဲ့ကျောင်းသားများအဖို့။ ရှိပါတယ်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးရန်အသင့်ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကုမ္ပဏီထံမှထွက်မတ်တပ်ရပ်။ ဆောင်းပါးအကြောင်းအသိပညာအတွက်အခမဲ့အဘို့ငါတို့အထွေထွေဘလော့။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်များနှင့်အတူကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာဝယ်ယူနိုင်ပါသည်နှင့်ဆက်ပြောသည်အဖြစ်ပို့စ်-ပွန်တာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသယံဇာတဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဆွာ၏ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူပူဇော်သက္ကာအဖြစ်အစည်းအဝေးနေရာအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသယံဇာတကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ရှိသမျှကျော်ထံမှဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ။ ဤသည်ကအတည်ပြုအောက်ပါကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အထင်ထုတ်ပြန်ချက်။"ဆေးစစ်ဖြစ်တော်မူသည်ပိုအရေးကြီးလုပ်ငန်းတွင်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း။ နောက်ဆုံးသော်လည်းမအနည်းဆုံး၊အသစ်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနသင်တန်းများလည်းဖန်တီးအသစ်တစ်ခုကိုလူထု၏ကျန်းမာရေးအလံတဲ့သူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်ခုချင်းစီအခြား။ ဤသည်အလွန်သာယာသောအဖြစ်အပျက်။"တိုးမြှင့် ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ဟာအရေးမဏ္ဏိုင်အနာဂတ်အတွက်။"နောက်ထပ်တစ်ခုအတွက်ဝဘ်အားလုံး၏ရလဒ်အရာဖြစ်ပါသည်၊ထိုသို့သဘာဝကျကျဤအပလက်ဖောင်းအတူဆွစ်ဆေးဝါးချ၊စောင့်ရှောက်နှင့်အတူတက်အကြိမ်။"ဒီနေ့အသစ်တစ်ခုကိုအသိစိတ်ကမွေးဖွားခံရ၊အထူးသဖြင့်အားဖြင့်ကွန်ယက်နဲ့ဆက်သွယ်မှု၏လူများနှင့်အချက်အလက်။ ၊အလွန်ကြီးစွာသောပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်။"အချိန်၏ နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများရှိပါတယ်အောင်မြင်ပြီး၊အပြန်အလှန်ရန်လိုအပ်သည်၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပူးေ၏လယ်ပြင်တွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလံများလိုအပ်သည်!အောင်မြင်သောစီမံကိန်းလိုအပ်ညာဘက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကောင်းတစ်ကွန်ယက်၏င္မ်ား ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၌သင်ကူညီပေးသည်သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေး။"တူ"(ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ)၊ကျွန်တော်ဦးဆောင်ကိုဒီဂျီတယ်လုပ်ယူရန်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်။ ဒီခရီးဦးကြိုပြုခြင်း၊လဲလှယ်အကြံဥာဏ်များနှင့်အချက်အလက်များအတွက်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏စောင့်ရှောက်မှုယူအဆက်အသွယ်နှင့်အတူဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအလုပ်လုပ်နေစတင်နိုင်ပါသည်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုကြာ။ ဒီအတည်ပြုဖို့၊ကျနော်တို့ဖန်တီးခဲ့ကြတစ်ကွန်ယက်၏။
အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊နိုင်မည့်နေ့စဉ်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုမှလူအဂင်မြို့ အဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအကူအညီလူတိုင်းရှာဖို့အသစ်အသိအကျွမ်း၊စိတ်ဝင်စားဆက်သွယ်ရေးနှင့်မေ့နိုင်သောအစည်းအဝေးတွင်ဒိန်း။ စတင်အသစ်တစ်ခုကိုအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဒိန္း၊ဒီမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်အားအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးငယ္ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊နိုင်မည့်နေ့စဉ်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုမှလူအဂင်မြို့ အဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအကူအညီလူတိုင်းရှာဖို့အသစ်အသိအကျွမ်း၊စိတ်ဝင်စားဆက်သွယ်ရေးနှင့်မေ့နိုင်သောအစည်းအဝေးတွင်ဒိန်း။ စတင်အသစ်တစ်ခုကိုအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဒိန္း၊ဒီမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်အားအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ရှာဖွေအတွက်:အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးဒိန္း၊အဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးဆိုက်ဒိန္း၊ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးငယ္
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှန်ချိန်းတွေ့။ ရသည့်တိုင်အောင်ပန်းဆက်သွယ်သည်သာနှင့်အတူအင်တာနက်နှင့်ချင်တဲ့တည်ထောင်ရန်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေး။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်အသိအကျွမ်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာအများသူလူများအတွက်အဘို့ရှာကြသည်မှန်ချိန်းတွေ့။ ရသည့်တိုင်အောင်ပန်းဆက်သွယ်သည်သာနှင့်အတူအင်တာနက်နှင့်အလိုအဆုံးသတ်သွားပြီးအမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေး။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်အသိအကျွမ်း။
ချက်အလက်အားလုံးကိုဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်အလိုအလျောက်မှစုဆောင်းထားသည့်ကမ္ဘာ့အဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူအချက်အလက်များဇြန္လဲ့ေလူမှုကွန်ယက်။ စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်လူကြိုက်များဆိုဒ်များအပါအဝင်စီမံကိန်း။ အချက်အလက်အကြောင်းတိကျမှန်ကန်မှုဆိုဒ်စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်မယူစုဆောင်းသတင်းအချက်အပေါ်ဒီကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုလုံး၊ဒါကြောင့်အလိုအလျှောက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေရှင်က"လူမှုကွန်ရက်ဇြန္လဲ့ေ"။ စိတ်ဝင်စားစရာလူကြိုက်များအပါအဝင်စီမံကိန်း။ အချက်အလက်အကြောင်းတိကျမှန်ကန်မှုဆိုဒ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်ရှိမဟုတ်
များအတွက်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ကုတ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်ကြောင်းအဆုံးမှာဆောင်းပါး၏။ အတွက်ဗီ၏ဥေရာပြဲမ်ား၊မၾကာမွီပြသရောင်စုံဖိနပ်ကိုထောက်ပံ့သောအသုံးပြုသူ။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှု"ဂျိန်းအ"ေၵျမြင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများအတွက်ပြင်သစ်ဟုခေါ်သည်။ လာရန်မြောက်မြားစွာမတော်တဆ။ တစ်နှစ်၊အာဇိတာ။။ေဆးကတစ်သဲလွန်စမပါဘဲပျောက်ကွယ်သွားနှင့်အတူအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲ။ ယခုအပျက်အတွက်တည်ရှိသည်ဖွင့်လှစ်သည်။ တစ်လမ်းပိတ်ဆို့အတွင်းအမျိုးသားပည္သူေဆန့်ကျင်ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများအ ထားနှင့်သတ်ကြ၏။ လက္ပိုင္းသင် သင်သည်သူ့ကိုသတ်အံ့သောငှါလိမ့်မည်၊ပြီးနောက်မကြာမီဝင်ရောက်အိနၵိဘူလ်အတွက်။ ထိုအခါဒါဟာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟန်အတွက်မုသာစကားကိုသိမ်းနှင့်စွန့်ပစ်။ ပထမဦးဆုံးလူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ခေါင်းကြီးပြင်သစ်ဘုရင်မရဲ့"သူမ၏သမီး"ခဲ့သောမှောင်ခိုသို့သြစတြီးယား။ နှစ်တိုင်းရှိတယ်။ နိုဝင်ဘာလအတွက်အ ဥက္ကာရေချိုးခန်းခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်လည်ပတ်။ တစ်ဦးခြင်းဗီဒီယိုပုံကိုရိုက်ကူးသောကြယ်၊ဤနှစ်တွင်ရှိသည်ရှို့မိုဃ်းကောင်းကင်၌ထ။ ပည္သူေဆန့်ကျင်ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများပြင်သစ်တွင်ထင်ဖို့ကျန်ကြွင်းစေပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကြောအစွန်းပေါ်။လူအသေအဆုံးရောက်ရှိ၊နှင့်ထိန်းရဲဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။သူမသည်ကစားခဲ့၏ရှေ့တွင်မိသားစုရဲ့အိမ်တော်အတွက်မြို့တမြို့အတွက်ပေါများ၊အကျားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်သေဆုံးသူများဒဏ်ရာရသူမ။ အတွင်းမီးလောင်မှုအတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယား၊မြောက်မြားစွာသောအရာဝတ္ထုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ သေဆုံးသူထွားလာသည်။ ယခုမရှိတော့မည်သည့်အဆိပ်အတွက်လေ။"တရံမဲ့လူအ"ဖြစ်ပါတယ်၊စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်း၊အဖြစ်လှူဒါန်း။ အခုကလိုအပ်ကြောင်းအားလုံးသုံးဆောင်ကြဥပဒေအရာ၌။ သူတို့ငြင်းရလဒ်များကိုနှင့်ပတ်သက်သော်လည်းဗြိတိသျှတို့၊သူ၏အခက်ခဲမ့္မည္ဟုခံစားမိပါတယ်။ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဇားမေတီျအမူကြမ်းသဘောတူညီနှင့်အတူအီးယူအပေါ် မှာတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါင်းနင်းလမ်း။ ဘိုင်ယန်အတွက်၊နှစ်ဦးကျောင်းဘတ်စ်ကားအတွက်ရှပ်အင်္ကျီအပေါ်လိမ်လည်ဖစ္ပါတယ္။ ရလဒ်အဖြစ်အပျက်၏၊လူေပါင္း၊ငါးသူတို့ကိုအလေးအနက်။ သားသမီးတို့တွင်ဒဏ်ရာ။ လမ်းလျှောက်နေစဉ်အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုများ၌ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်လျက်ရှိသည်သြစတြီးယား၊ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောည့္ခ:ဆွစ်ဇာလန်ရှိတောတက်ကြွမြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်။ ပြီးနောက်ကွက်ဆန့်ကျင်စီစဉ်ထား အတူသဘောတူညီချက်အမွားမ်ား၊များစွာသောဗြိတိသျှဝန်ထွက်ခွာနေကြသည်။ ဒုက္ခသည်များအတွက်ဘော့စ၊ေကာ၊အဘယ်သူသည်လိုအပ်သောအစီရင်ခံစာ၏အကြမ်းမဖက်ခြေအနေ။ ယခုဗီဒီယိုကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သိရသည်။ နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏ပုန်းအောင်းအောက်ရေခဲစာရွက်:ယခုသုတေသီများတွေ့ရှိတစ်ခုမှာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကျောက်များတွင်ဂရင်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အနိမ့်ဂျင်ကြောင်းအရာအတွက်အသေခံဇုန်များ၊အပင်နှင့်သတ္တဝါများမရှင်သန်။ ေျမာက္ကိုးရီးယားပြည်နယ်မီဒီယာအစီရင်ခံသောကင်မ်ရဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများမှာသစ်တစ်မျိုးကိုစမ်းသပ်နည်းဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးရေးလက်နက်၊ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထိန်းချုပ်ထားသော။ အနောက်ဗာဂျီး(ယူအက်စ်အေ)၊ထိုမြို့၏ဖရိုဖရဲတိရိစ္ဆာန်များရဲတပ်ဖွဲ့။ သူတို့ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏အမျက်ဒေါသ။ ပြီးနောက်သြစတြီးယား၊ဟန်ဂေရီ၊ဘူလ်ဂေးရီးယားနဲ့ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ဘာသာျပန္ခ်က္လည်းရွေ့လျားနှင့်ကမ္ဘာမြေကိုစွန့်ခွာင္ငံတကာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု။ အမ်ဳိးအလူး၊ညှပ်၊၎င်း၏န်ထမ်းနှင့်အတူအဆိပ်များအတွက်ကိုယ်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်ဖို့။ ယခုသူသည်ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုနှင့်အတူလူသတ်မှု။ ေမြးေ၏မင်းသားချားလ်စ်၊တစ်သစ်ရုပ်ပုံများ။ ကြည့်ကျော်လွန်နန်းတော်၏မြို့ရိုးနှင့်လို၏ဘဝအသက်တာတွင်တော်ဝင်မိသားစု။ ကာလအတွင်းရှာအမျိုးအစားအတွက်နယူးဂျာစီပြည်နယ်၊အမေရိကန်ပြည်နယ်၊ရဲတပ်ဖွဲ့တြအတွက်ခွေးတစ် အခြေအနေ။ ျဖင့္ၿပီးသားသေပိုင်ရှင်အေးခဲ။ သြစတြီးယားသည်စမ်းသပ်ခြင်းအမြန်နှုန်းအပေါ်အချို့သော ။ အဘယ်သူသည်ဥရောပတိုက်တွင်၊မဟုတ်ရင်အသုံးပြု၊နှင့်အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်? တစ်ဦးသံသယရှိတက္ကစီမောင်းသူအကျင့်အတွက်မြူးနစ်တစ်နှစ်နေစဉ်၊အခြားတက္ကစီယာဉ်မောင်းနှင်တိတ်တစ်ယစ်မူးသား။ လောလောဆယ်၊ကိုတုန့်ပြန်ခြင်းအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားရုံးနှင့်အမျိုးသမီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုသည်။ အပြည့်အဝဆိုက်ကိုသုံးပါ၊ကွတ်ကီးများကိုသုံး။ လက်ခံရန်ကွတ်ကီးများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နှိပ်"အိုကေ"။ အသေးစိတ်အချက်အလက်၊ကွတ်ကီးများအသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားလွယ်ကူတဲ့အသုံးပြုမှုအကြောင်းအရာနှင့်ကြော်ငြာတွေအပိုင်းသည်ဖြာ၏လက်လှမ်း။ ကျနော်တို့ကွတ်ကီးများထည့်သွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းများအရနိုင်ဖို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့အကြောင်းစိတ်ကူး၏အသုံးပြုမှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုဒ်များ၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သတိပြုမိဖြစ်၏နောက်ဆက်တွဲလုပ်ရပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်တိုးတက်။ ဤကွတ်ကီးများအတွက်လိုအပ်၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုမဖြစ်မနေဆိုက်နှင့်မပိတ်။.
ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးအသစ်နီးပါးမင်းဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့၊ဖန်တီးအသွင်ချိန်းတွေ့၊ရော၊မင်နှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ရုရှားဗီဒီယိုချက်တင်ကအရမ်းအဆင်ပြေ၊လွယ်ကူ၊သာယာသောမွတ္ထားနှင့်လှပဒီဇိုင်းကို။ ဒီဘက်ပါ၊သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူနားလည်အရာအားလုံးအမိန့်အတွက်ပြသရန်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်း၊သင်ကနိုင်လိမ့်မည်ဖြုန်းဖို့တစ်သာယာသောအချိန်နှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်းအသစ်အသိအကျွမ်းများ၊မိတ်ဆွေများကို၊ဆွေမျိုးသားချင်းများ၊အတန်းဖော်များသို့မဟုတ် မိတ်ဆွေဟောင်းစိတ်ဝင်စားနေသော။ အများကြီးအဆင်းလှသောစတိုင်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်ကစားတဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်ရှာနေကြသူအသစ်ရက်စွဲများ။ ဗီဒီယိုစကားပြောဆင်တူသည်ရုရှားနာမည်ကျော်ချက်တင်ကစားတဲ့၊အကျော်ကြားဆုံးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ဆောင်မှုအစာရှောင်ခြင်းဗီဒီယိုချက်တင်၏၊ရော၊ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ချစ်ကြည်ရေး။ အပေါ်အခြေခံနိယာမများ၏ကျပန်းရှာဖွေတဲ့အဖော်၊ပစ်လွှတ်ကစားတဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ထားသောအဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုတစ်ကျပန်းအသံုးျပဳသူမ်ား၏။ သင်သာအဘို့ရှာဖွေမိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်း၊ဒါပေမယ့်လည်းစုစည်းစကားပြောသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ။ ပေးရုံမှမိတ်ဆွေတစ်ဦးပြီးနောက်စကားပြောခန်း၊အကူးအပြောင်းလိမ့်မည်။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းချက်တင်ဝန်ဆောင်မှု။ ခေတ်သစ်၊အဆင်ပြေ၊နှင့်နီးပါးအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု၊အဆုံးအခြေစိုက်စခန်း၏အသုံးပြုသူများနှင့်အတူ၊ဝက်ဘ်ကမ်ဆင်သင့်နေသောစကားပြောခန်းအတွက်ဗီဒီယိုကစားတဲ့နီးပါးမည်သည့်အချိန်တွင်မ။ ချက်တင်-အကစားတဲ့အဓိကအတွက်ရည်ရွယ်အားလုံးဘာသာစကားအသုံးပြုသူများသိရှိရန်အတွက်အထောက်အပံ့။ ဒီဘက်ပါ၊သင်ဆက်သွယ်နိုင်အတူမိသားစု၊မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်း၊ပင်ပြည်ပမှ၊သင်မူကားလည်းတွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူ င္ငံျခားသားမ်ား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်စျေးနှုန်းတွင်ထည့်သွင်း၊အဓိကစကားပြောမှုများကိုရရှိနိုင်မပါဘဲငွေပေးချေမှု၊နှင့်ပေးဆောင်ချက်တင်လုပ်ငန်းဆောင်တာအတော်လေးစျေးပေါနှင့်၎င်းတို့၏ငွေပေးချေမှရရှိနိုင်အားလုံးနီးပါးကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများ၏။ ထို့အပြင်၊အသွင်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ရေးကမ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ပိုနေ့တိုင်း၊နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့်ပြည်ပ။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏၊အရမ်းအဆင်ပြေဖြစ်ပါတယ်၊ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူအွန်လိုင်းအတိုင်းအသုံးပြုသူ၏ကြောင့်ကမ်ခွင့်ပြုသင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အသုံးပြုသူများအားလုံးမှကမ္ဘာအနှံ့၊အပင်မရှိဘဲပွင့်မှတစ်တောင့်သက်သာကုလားထိုင်နှင့်မည်သည့်အချိန်၊မထွက်ဘဲ။ ဒုတိယအ၊ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်လက်တွေ့မလိုအပ်ပါဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေသည်-အများဆုံးအရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအဘို့အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုသည္အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ဆိုက်နှင့်အတူအွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်၊သောငါတို့သည်အပြင်သင်ဖို့၊အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်နာများနှင့်ပရိုဂရမ်ကိုသုံးပြီးနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာပါ။ ကျေးဇူးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း၊သင်ယခုထိုခံစားကြည့်ပါအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကျွန်ုပ်တို့၏ရုရှားဗီဒီယိုကစားတဲ့အတွက်နှင့်အတူစကားပြောနှင့်မိန်းကလေးများ ယောက်ျားလေးများ။ ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့စကားပြောအစည်းအဝေးများပိုပြီးအဆင်ပြေလုံးအသုံးပြုသူများအတွက်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တွေ့ဆုံရန်အားလုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်နှင့်အဆန္ဒကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏။ သင်ရွေးချယ်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခမဲ့ကစားတဲ့၊သင်ရလိမ့်မယ်ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုအယူ၊ရိုးရှင်း၊သက်သာခြင်းနှင့်အလွန်ကြီးစွာသောအချိန်။ သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီအာမခံနိုင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဝန်ဆောင်မှု၊တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေး၏ဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုက်နှင့်အမြင့်ဆုံးနှစ်သိမ့်များ၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပြည့်စုံသောလုံခြုံရေး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မကြာခဏဟုခေါ်၏။ အရာအားလုံးအကျင့်ကိုကျင့်အဆိုအရဒီနိယာမ:အမြန်ဆုံးသကဲ့သို့သင်တို့ကိုနှိပ်ပါ"စတင်ဗီဒီယိုချက်တင်"၊ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ရန်တစ်ဦးကိုကျပန်း ။ ဆိုရင်ကာင္မေလး၊အမယ်ဆိုရင်၊သင်ကမိန်းကလေးနှင့်အတူကောင်လေးတစ်ယောက်။။။သင်ကြိုက်လျှင်တစ်ဦးကိုကျပန်းလူတူ၊သင်သည်မပြုလျှင်၊သင်နှိပ်နိုင်သည်အပေါ်အောက်ပါမေးခွန်းလွှာ။ ပြီးနောက်၊သင်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်သည့်သစ်တစ်ခုကျပန်း ။ လျှင်သင်မည်သည့်ချိုးဖောက်မှု၏ဤအချက်များ၊သင်အန္တရာယ်ရတဲ့ပိတ်ပင်ရန်သို့မဟုတ်ပိုမိုပြင်းထန်သောပြစ်ဒဏ်များ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ပင်အော့ဖ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်သည့်။ အားချက်တင်ကစားတဲ့၊ချိတ်ဆက်တစ်ကမ်နှင့်မိုက်ခရိုနီတာ၊မှတ်တမ်းနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆို။ နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ရုရှားဗီဒီယိုချက်တင်အခမဲ့များအတွက်နာရီနှင့်အသေးစိတ်အနှုန်းမိနစ်။ ယူစိတ်အပိုင်းအတွက်ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲဆာ့ကနေတဆင့်တစ်ဦးလူကြိုက်များအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ယက်။ နှင့်န်ဆောင်မှုများ:ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်၊လံုးခ်င္း၊၊ဂူ၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ မှတ်ပုံတင်အတူပဲ။။။။ မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်တွင်အဆိုပါဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့၊သင်စကားပြောမယ်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ကနေတဆင့်ကမ်၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကမ္ဘာအဝှမ်းများ၊တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့အများကြီးပို။ သင်သည်လည်းသုံးနိုင်သည်ရာစာသားများအတွက်အခမဲ့။ အာရုံစူးစိုက်မှုကို! ငါတို့သည်လည်းအကြံပြုပါသည်သင်ကြိုးစားအကောင်းဆုံးအခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူလူကြိုက်များကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်။ အစွမ်းထက်တဲ့ဒေတာဘေ့စ၊အများအပြားအသုံးဝင်သောဝန်ဆောင်မှုနှင့်အင်္ဂါ။ သင်လိုအပ်သမျှနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသားနဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အကမ်၊မိုက်ခရို၊ ကီးဘုတ်နှင့်။ ။ ဗီဒီယိုစကားပြောသည်သာအဘ်ချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုသင်ရခွင့်ပြုထားသောအကျွမ်းနှင့်အတူအင်တာနက်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နဲ့ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်၊အသုံးပြုပြီးမည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူကင္မရာ၊ဘေရာက္ဇာနှင့်ကီးဘုတ်။ သင်နိုင်အောင်စျေးပေါတဲ့ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူဆွေမျိုးသားချင်းများ၊အသိအကျွမ်းနှင့်မိတ်ဆွေများကို၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဖန်တီးပါ"ကစားတဲ့"ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူတစ်ဦးကိုကျပန်း ၊ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဦးကမိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးထံမှမည်သည့်မြို့သို့မဟုတ်ပင်။ နှင့်"စာသား"စကားပြောသည်ကြီးလှ၏စာသားနှင့်အမည်မသိဆက်သွယ်ရေး။ လက်လှမ်းဖို့ဗီဒီယိုစာသားမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း-ကနေတဆင့်လူမှုရေးကွန်ရက်သို့မဟုတ်။ စတင်စကားပြောကိုအွန်လိုင်းမှသင်ယူခြင်း၊မေတ္တာနှင့်မိတ်ဆွေများဖြစ်။ မှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်အားလုံးချက်တင်အခမဲ့နှင့်အလွန်အစာရှောင်ခြင်းကြောင့်ထက်လျော့နည်းကြာ။ ဆုရှင်များ"အသံသည္"ဆုအတွက်မြို့တော်ကိုအားပေးအားမြှောက်သောရုရှားအင်တာနက်လူထု၏လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူများ။ အဆိုပါပွဲ၌စကားပြောခြင်းငှါသွားကြ၏"အမျိုးအစားအကောင်းဆုံးချက်တင်အမ်ဳိးအစား"။ ဒီနယူးအတွက်သာ။ သင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုစီမံကိန်းသည်အကောင်းပုံသဏ္ဍာန်အတွက်၊ကျေးဇူးပြု၊ ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံမျှဝေခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ဗီဒီယိုနှင့်စာသားအတွက်အပေါ်မည်သည့်လူမှုကွန်ယက်။
တုန် အဘို့အမြော်လင့်သောသူအပေါင်းတို့နေကြတယ်ငြီးငွေ့၏ခန့်မှန်းသူတစ်ဦးအတွက်ထိုအုပ်စုဓါတ္ပံု၊ယခုအမှန်တကယ်အပိုင်ရှင်၏ပရိုဖိုင်ကို၊အုပ်စုမှာဓာတ်ပုံ။ ချစ်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကိုလည်းအခွင့်အလမ်းတခုအဘို့ လူတွေအလုပ်လုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့မှော်။ အတွက်ဒါခေါ်ချစ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယို၊အသုံးပြုသူများ၎င်းတို့၏အကောင်းဆုံးဆိုဒ်များဘယ်လိုပြသ မျှော်လင့်အတွက်၏စကားလက်ဆုံသို့မဟုတ်မေတ္တာအားဖြင့်မိမိတို့အအစည်းအဝေး။ ပြီးနောက်အသစ်လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်မှာထိုအက္ပ္ကိုအတွက်နှစ်ပတ်ခန့်အတွက်သြစတြီးယား၊သူတို့ကယခုတစ်ခုတည်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်၊မူရင်းကိုရွေ့လျား။ အပြင်၊သူတို့ဝင်ငွေနိုင်သွင်။ ပိဳင္ကားအထမင်းချက်၊အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၏အတွေ့အုပ္စု(ချစ်ပြုမူ)စိတ်ကျေနပ်မှု:"ပထမအမှန်တကယ်အချိန်ဒေတာကနေပြင်သစ်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်သည်ကောင်း၏။ အသုံးပြုသူများ၏ပျမ်းမျှထက်ပိုမိနစ်ဗီဒီယိုများတစ်နေ့လျှင်နှင့်လွှင့်ကြ၏ပျမ်းမျှထက်ပိုမိနစ်အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုကိုတစ်နေ့လျှင်။ ဤကိန်းဂဏန်းများကိုပထမဦးဆုံးတစ်ဝက်အပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနခွဲအလားတူအက္ပ္မ်ား။"အသစ်လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်မျိုးလုံးသည်ရရှိနိုင်ပါသည် နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် ကနှင့်အတူစတင်တစ်ဦးစွန့်ပစ်ဗားရှင်း။"တွေ့နိုင်ပါသည်ရဲ့အောက်ခြေမှာမီနူးဘားအတွက်"တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ"အပိုင်း။ သင်လုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေသင့်ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်၊သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ရေးအခြားဗီဒီယို။ ရင်နှင့်သောအခါအဘယ်သူမျှမအသက်ရှင်သောဗီဒီယိုချစ်ကြောင်းလည်းဖန်အီတလီနိုင်ငံ၊သည်မဟုတ်သေး။ အဖြစ်မကြာမီအဖြစ်ဒီသတင်းထွက်လာတော့၊သင်ဖတ်အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာ။ အတူစမတ်ဖုန်းနှင့်ရှင်းလင်းပြသ၊သင်ကအကောင်းတစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်သင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်း။ အများဆုံးဖက်ရှင်အားလုံးမိုဘိုင်းဖုန်းများဒီနေရာမှာတှေ့နိုငျ:ဖြုန်းဖို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအချိန်အတွက်အဘယ်အကြံဉာဏ်ကိုသင်လိုက်နာသင့်ပါသည်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာပြခန်းသင်ပြောပြလိမ့်မယ်:သင်တို့သည်မဖြစ်ကြလျှင်လုံးဝသေချာမေတ္တာအကြောင်းလုပ်ငန်းဆောင်၊သင်သည်သင့်အကောင့်ကိုချစ်-ပယ်ဖျက်ပြီးသင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှု။ တစ်နှစ်ရက်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့လီေ:သင်ရှိသည်ချင်သော၊ရင်ခုန်စရာသို့မဟုတ်အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊အခြားချိန်းတွေ့နည္း။ ပြောပြကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့အလှဆုံးနှင့်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဇာတ်လမ်းအတွက် မွတ္ခ်က္မ်ား။
အမျိုးသမီးများ၏အ - နှင့်အတူအခမဲ့ချိန်းတွေ့၊ပိုလန်ချိန်းတွေ့
ငါငါ့အသက်ကို။ ကျွန်တော်ထင်တာတော့ပိုကောင်းသည့်အခါလူတိုင်းသည်ကောင်းစွာလုပ်နေတယ်။ ငါသေချာပါတယ်သင်ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ။ ငါလို။ ငါကချစ်။ ငါချစ်ပွင့်သောအပွင့်။ ငါ့အကြိုက်ဆုံးပန်းပွင့်သည်ပန်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကြာပန်းပန်းပွင့်။ ငါပြုံးနှင့်ပျော်စရာရှိသည်။ ငါပြောဆို၏။ ငါ၏ဖန်ဆင်းခြင်းကိုအဆင်ပြေသည်။ ဤအိမ်တော်သည်အစဉ်အမြဲပူနွေးနှင့်ဆက်ဆံရေးနွေးထွေး၊ချစ်ကြသည်နှင့်လက်ခံသိရန်မိမိတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ။ ငါရိုသေလေးစားမှု၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ရည်မှန်းချက်နှင့်အဖြစ်ထိရောက်သော။ ငါစုဆောင်းပြင်းပြပြီးအမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုများအပေါ်အခြေခံပြီးသူအမျိုးသားများမလာကြပါပြီဟုသင်စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူ၊နှင့်အတူတူကျနော်တို့အပေါ်တူညီသောလှိုင်းအလျား၊အမြင်နှင့်အတွေးဆီသို့အလားတူတန်ဖိုးများနှင့်အမြင်များ၏ဘဝအဖြစ်အများသူအမျိုးသားများကိုချစ်၊နန်းနှင့်မေတ္တာ၌ပြိုလဲ။ ခိုင်ခံ့သောအမကိုသူသာအနိုင်ရခဲ့၊ဒါပေမယ့်သူထင်၊ပိုအတက်မျှော်မှန်းအားလုံးနှင့်အတူအချို။ အမျိုးသမီးများအတွက် - ။ မှတ်ပုံတင်အခမဲ့အဘို့အကအားလုံးကိုဒေသများရှိအမျိုးသမီးနှင့်အတူမြင်နိုင်ကိုယ္ေ။ ဆိုက်မှတ်ပုံတင်နှင့်အပေးအခွင့်အလမ်းများအတွက်အပြန်အလှန်နှင့်အတူအမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်လူနေမှု - နှင့်အခြားဒေသများ။ ရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွမ်းဖန်တီး၊အချစ်သစ်ဖြစ်စေလျက်၊အသိအကျွမ်း၊မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစု၊ခံစားချိန်းတွေ့ဆိုက်။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆွစ်ဇာလန်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုများ-လာမည့်မျိုးဆက်များ၏ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နေရာအသုံးပြုသူများအချင်ပြောဆိုရန်လူတို့နှင့်အတူအွန်လိုင်းသင်တွေ့ဆုံမီမှာ၊ဖင္။ ဆန်းသစ်ဗီဒီယိုချက်တင်ချိတ်ဆက်နိုင်မည့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်တစ်ဦးလက်ငင်းအတွက်။ သင်ကခံစားနိုငျအခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ကနေတဆင့်ကမ်၊အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာ၊ရောပနှင့်ပျော်စရာရှိသည်မပါဘဲမည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားများ။ ကခလုတ်ကိုနှိပ်ပါနှင့်လို့မရခံစားကြည့်ပါအွန်လိုင်းချက်တင်မိန်းကလေးများအဘို့၊သို့သော်ကယ်တင်သောဆိုဒ်များအမျိုးသားများသည်များသောအားဖြင့်? ဗီဒီယို ချိန်းတွေ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်တော်လှန်ရေးအတွက်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ဖို့ခွင့်ပြုသောခံစားဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသား။ ဆက်သွယ်မိန်းကလေးများအတွက်စကားပြောနှင့်ပျော်စရာရှိသည်ချင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကစကားပြောခန်း၊တစ်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး၏ကြီးမြတ်။ သင်၊ကစားခြင်းအားဖြင့်ဂိမ်းအတွက်တစ်နာရီပူးပေါင်းအခါသင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊အပေါင်းတို့နှင့်အတူအမျိုးသမီးအသုံးပြုသူများ။ အခမဲ့ကြောင့်ကြိုးစားပါနှင့်ပျော်မွေ့ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသော။ ကိုယ့်အလှည့်ချွတ်ကင္မရာ၊နှင့်ကျပန်းမိန်းကလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်၊ကိုယ့်ကိုနှိပ်ပါ"နောက်တစ်ခု"။ မေ့ရာအားလုံးသင်ထင်သိအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိသူများကဖန်တီးအနေနဲ့ဆန်းသစ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုစနစ်ဟာချိန်းတွေ့အကြောင်းကမ်းလှမ်းအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပြီးအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပါ။ ပြောဆိုရန်မှာမိန်းကလေးများအထိခလုတ်တစ်ခု၏ခံစားကြည့်ပါသစ်ကြီးသောအရာဖြစ်စေမည်သူတို့ခံစားရပင်ပိုကောင်း။ တစ်ချိန်ကသင်ကစတင်သုံးစွဲဗီဒီယို ချိန်းတွေ့၊သင်စတင်မည်ပါဝင်ချက်ချင်းကြောင့်၊သင်ရလိမ့်မယ်ရပ်တန့်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုစကားပြော! စတင်ငှားရမ်းတိုစမ်းသပ်ဗားရှင်းနေစဉ်လိမ်အောင်လေယာဉ်
ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုအတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကျော်များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သောအင်တာနက်။ အကူအညီဖြင့်အင်တာနက်နှင့်သှေးဆောချိန်းတွေ့၏၊သင်သည်လည်းဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်သုံးပြီးပါပြီတစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစုအနာဂတ်။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊၅၈၍ကွာရှင်းသို့မဟုတ်လက်ထပ်။ ဒီ ရှိလိမ့်မည်ကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်ပါ။ မျှော်လင့်ကစားရန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ယခုအဟ။ အေျပာင္းအတွေ့န်သာ အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်စစ်မှန်သောႏွင့္၊အလုပ္တစ္ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းပြီးထပ်မံတီထွင်။ ဒီဆိုက်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏တာဝန်ခံအခမဲ့မည်သူမဆိုများအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့အကဲဖြတ်။ အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး ၏သစ်တစ်ခုအဆင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုများမှာသင်တို့အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့အခမဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်၊သင်ဖူးကြားဖူးတယ်။ အတိတ်အတွက်၊ အ လူယောက်ျား၏ဆုချီးမြှင့်။ အသက်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအမျိုးသမီးသင်ယူဖို့လိုလားသူတစ်ဦးအဖြစ်မျှဝေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။။။။။ အတားအဆီးတစ်ခု။ ဤသည်မုန့်။ ဦးစားပေး:ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အကျွမ်းနှင့်အတူမြင့်မားသောအဆင့်၌တည်၏။ မင်္ဂလာပါ။ ငါသည်လည်းတွေ့ဆုံကောင်းတစ်ဦးစုံတွဲ(အမျိုးသမီး ၃၅-၃၇ အသက်အနှစ်)။ ငါတို့သည်လည်း ၅နှစ်၏သဟဇာတ။
အစီအစဉ်။ ဤသည်ဖြစ်စေအငွေ့၊မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီး၊သို့မဟုတ်လူငယ်တစ်ဦးလူတစ်ဦးနှင့်အတူအဆင့်မြင့်ပညာရေး။ အပေါင်းတို့နှင့်အတူနောက်ဆက်တွဲလိုအပ်သောစာပေးစာယူ။ ငါသည်လည်းချင်ပါတယ်လိပ်စာအမျိုးသားများအတွက်၊ကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်၊ဖြစ်နိုင်ရင် ယခင်စစ်ဘက်အမှုထမ်းများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများ။ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မဟာသာမန်လူတစ်ဦးနှင့်အတူပုံမှန်လိုအပ်ချက်နဲ့အလိုဆန္ဒ။ ငါအတူအချိန်ဖြုန်း။ ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူဘာသာရပ်များဖြစ်ကြောင်းပြန်အလှန်စာနာ၊နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိသော၊နှင့်ဖြစ်ကောင်းလူသိများ)တစ်ဝက်-ဤစွမ်းရည်မှစ၍အင်တာနက်၏သဟဇာတအပေါ်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဓာတ်ရစေ ။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း။ ဤသည်အလေးအနက်ချိန်းတွေ့မေးခွန်း။.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အဘို့အရှာသောသူတို့သည်စစ်မှန်သောချိန်းတွေ့နှင့်အတူလူကနေဒိန်း။ လျှင်သင်ပြီးသားပန်းဆက်သွယ်ဖို့သာအင်တာနက်ပေါ်နှင့်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေး၊အလုံအလောက်နှောင့်နှေး။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့အကြာကြီးမဟုတ်။ အဓိကအရာမဖြစ်ရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းသင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအလိုလိုရောက်လိမ့်မည်၊။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အဘို့အရှာသောသူတို့သည်စစ်မှန်သောချိန်းတွေ့နှင့်အတူလူကနေဒိန်း။ လျှင်သင်ပြီးသားပန်းဆက်သွယ်ဖို့သာအင်တာနက်ပေါ်နှင့်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေး၊အလုံအလောက်နှောင့်နှေး။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့အကြာကြီးမဟုတ်။ အဓိကအရာမဖြစ်ရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းသင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအလိုလိုရောက်လိမ့်မည်၊။
မင်္ဂလာပါ။ ငါအေးအေးဆေးဆေး၊ဖြည်းညှင်း၊အပြုသဘောအမျိုးသမီး၊အမျိုးနှင့်နွေးထွေးသောမှတစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့။ ငါအလွန်ချစ်။ ငါ၏နွေးထွေးမှုနှလုံးနှင့်ဝမ်းမြောက်၏။ ကျွန်မအသက် ၂၅ နှစ်မများအတွက်ရရှိနိုင်ဖင်အာ ။ ငါလက်မခံကဒ္ႏ။ နောက်ထပ်လိပ်စာ။ ထိုမြို့၏လန်နိုင်ငံ။ ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။။။။။ ကျွန်တော်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ယုံကြည်အသိအကျွမ်း၊လျောက်ပတ်သောအလုပ်သည်ပိုပြီးလေးနက်သောဆက်ဆံရေးကိုအတူအပြုသဘောဆောင်လူ-။ ငါပျော်ရွှင်စေဖို့သူ့ကိုတွေ့လျှင်ငါ၌အသက်ရှင် ။ ဘတ်သို့မဟုတ်လန်နိုင်ငံ။ ငါအတွေ့-ငါသည်လည်းတစ်ခုတက်ကြွလူနေမှုပုံစံစတဲ့:ရေကူး၊စက်ဘီးစီးခြင်း၊ပြေးနှင့်တောင်တက်၊ဒါပေမယ့်ငါ့စိတ်အားထက်သန်များအတွက်ခရီးသွားလာမည်မဟုတ်အနာဂတ်အတွက်ပြောင်းလဲ-"။ ကျွန်မတွေးမိလျှင်အဘို့အကြည့်ရှုသင့်တဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားစောင့်ရှောက်ဖို့ကိုယ်စိတ်ဝင်စား။ ငါသည်အမင်္ဂလာဖြစ်၏အတွက်ဖြစ်ဖို့အပြင်နှင့်ပျော်ရွှင်ခံစား၊ေျပာသလိုဆက်လက်ကစားရန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်အသွား၊အစဉ်အမြဲဂရုတစိုက်၊အရှုံးမသွားသကဲ့သို့မျက်မှောက်၏အနှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏။ ငါ့နာမကိုလွခ်။ ၆၅ နှစ်အရွယ် ၁၆၆-၇၃ မတ်၊ယုံကြည်သောပညာရေးလေ့လာကျင့်၊ဂရုစိုက်ဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်ပါသည်၊ပြဿနာတွေမပါဘဲ။ -"ဆင်းရဲ":မိုက်မဲ၊အပျင်းကြီးသော၊လောဘခံစားချက်အောင်ဟာသက။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်အမျိုးသမီးလည်းဖင်လန်နိုင်ငံမှာအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူမြင်နိုင်ကိုယ္ေ။ ပြီးနောက်၊သင်ခံရလိမ့်မည် မှတ်ပုံတင်မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုအမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်သာဖင္လန္၊ဒါပေမယ့်လည်းအခြားနိုင်ငံများအတွက်ကမ္ဘာ၏။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အောင်မေတ္တာ၊အသစ်သောအသိအကျွမ်းတွေ၊မိတ်ဆွေတွေနဲ့အကွယ်၊ကိုခံစားချိန်းတွေ့ဆိုက်။
၂၀ မည်သည့်အညိွႏႈိင္းေ လုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား
"။ ငါသည်လည်းချင်စိတ်ရင်းမှန်ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်လေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်နေသောသူတို့ချိန်းတွေ့ဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့အားလုံးအမျိုးသမီး။ ဤအတတ်သည်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ငြင်းဆန်၏မျက်နှာနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အာရုံစိုက်။ သို့သော်လည်းရှိနေကြသည်မဟုတ်လူအတော်များများအဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေသူတစ်ဦးချဉ်းကပ်နည်း။ ငါရေးထားမည်အကြောင်းအရာကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်သင်အတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ အမျိုးသမီးများကိုခြောက်လအဆင်ပြေ၊လွယ်ကူဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အ၊ထိုအခါအသက်ရှင်သောအစည်းအဝေး၊အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ ဒါပေမယ့်သင်မည်သို့ပြုမူသည့်အခါအထူးရှိပါတယ်အခြေအသငျသညျကြည့်ရှုစေနိုင်ဘွယ်၊တောင်အလုပ္လုပ္ခြ၊ကြွယ်ဝသောသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးသင်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ၇ အခြေအနေလျှင်၊သင်၏မဟာအထူးချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူဆက်ဆံရေးကိုအလုပ္လုပ္ခြလျှင်၊သင်သည်ငွေရတတ်သော၊ကောင်းစွာ-ကို-လူနေတယ်ဆိုရင်တစ်ဦးကြင်ဖော်မဲ့မိခင်ခြင်းမရှိဘဲကလေးများ၊သူကြိုက်သွားဖို့နေရာတိုင်းဒါပေမယ့်ရုပ်ဆိုးသော၊သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသောသူတစ်ဦးကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မင်္ဂလာပါ၊သင်ပန္ဆက္ဆံလိုက္တယ္။အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အများကြီးအရှက်။ ဒါဟာအရေးကြီးပါသည်နှင့်သဘာဝဖြစ်ဖို့သေချာသောပထမဆုံးဆက်သွယ်ရေးဘူး"သွား"။ လည်း၊ျမရှုပ်တည်နေရာအပြုအမူ။ ဖို့ဘယ်လိုတစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းသောသူချိန်းတွေ့ကြမည်မဟုတ်မရှိဘဲသင်။ ဤအဖြစ်အပျက်သည်သာသိ့ုမဟုတ်၊ဒါပေမယ့်လည်းမဖြစ်မနေ။ သင်မိတ်ဆွေဖွဲ့နှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်သောသူမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေအင်အားသို့သင်လက်ထပ်ထိမ်းမြား. ပထမဦးဆုံးစကားလုံးသည်"ကြောင့်အခြေအနေ"သို့မဟုတ်"ကြောင့်တိမ်း"။ ဒါဟာဝမ်းနည်းဖွယ်အခါတွင်ပျောက်ဆုံးစဉ်းစား၊ဒါကြောင့် သင်အကူအညီလိုအပ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်၊အစဆြးေႏြးပြပွဲများ၊ရုပ်ရှင်တွေ၊စသည်တို့ကို။ နှင့်ထုတ်ဖော်သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်။ အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်လုပ်ရပ်များကိုယူရန်လိုအပ်ပါတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်တွင်၊အပင်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အထောက်ခံသူ၏ကိုယ်ပိုင်ဆွဲဆောင်မှုမိန်းကလေးကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲသင့်လျော်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်၊သူအတွက်စိတ်ဝင်စားအခမဲ့၊သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်လူငယ်အမျိုးသမီးများ၊ဘာမှမပို။ ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သင့်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့။ အကျိုးအတွက်အနာဂတ်မိုးသည်းထန်စွာ စွန့်စားသည်အမျိုးသမီးနှင့်ဖုန်းအရေအတွက်၊လိုအပ်ပါဘူး။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှသတိပေးမှသူမခေါ်ညနေခင်းတွင်၊အထူးသဖြင့်သူမ၏မိုဘိုင်းဖုန်း။ ပါက ရှိပါတယ်ဖုန္းနံပါတ္၊အစကားပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးလျှင်မလေးသိမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘယ်သူသည်ယူလိမ့်မည်ဤအပြုသဘောအကြံဉာဏ်၊သူမပါဘူးလို့စိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်ကိုအကြောင်းရွေ့လျားသူတို့ကိုအကြား။ ဒါကြောင့်သင်ဟာသင့်အဆင်ပြေဝံ့လျှင်သင်အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်၊ဒါကြောင့်လူများအတွက်။ ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်သင်ဖို့အရေးရှိပါတယ်သည့်အခါ။ ယောက်ျားနည်းပါးမြှင့်တင်မှပထမဦးဆုံးဆက်သွယ်ရေး လွတ်လပ်ပြီးနောက်ပေးဆောင်ချိန်ခွင်လျှာ။ အကြားရပ်တည်နိုင်ပေးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပုံချစ်ရသူတစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးမိုးရာသီနေ့အခါအကျဥ်းအတလျှောက်လမ်းလျှောက်အကစ္တီ သာ ။ အရင်ချဉ်းကပ်ရပါမည်"အနီးကပ်ကြည့်ရှု"။ အခါယောက်ျားသည်သင်၏အရှေ့တွင်သတိပေး၊သူကသင်ကြည့်။ အခါမျက်လုံးအပြုံး။ အဲဒီလူရဲ့စိတ်နှလုံးခဲ့ရာကိုသူတို့ပြောပြချင်ခဲ့တယ်သင်အတိတ်များအတွက်ဝက်။ ဒီလူရဲ့တုံ့ပြန်မှုအမှိုက်၊သင်ပါလိမ့်မယ်နောင်ပေမယ့်၊ငါဆိုသည်ကားသင်သည်လည်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူတစ်မူထူးခြားရုတ်တရက်ဆိုပြုချက်ကို။ ဒါကြောင့်စဉ်းစားရန်အချိန်ရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုသင်ပေးချင်အချက်ပြမှုများပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်၊နှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်၊သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်။ မရကြလျှင်၊သင်အစွမ်းသတ္တိဒီလိုလုပ်ဖို့၊သင်အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ချင်တယ်အတွက်"လူအမျိုးသမီး"။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဦးဓာတ်ပုံဆရာအဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသို့မဟုတ်ယိုဂီတပညာရှင်၊အရေပိုက်သမားအဖြစ်၊လျှင်တစ်မိသားစုပါပါကအပေါ်တစ်ဦးမော်တာ။ ငါ၏စောင့်ရှောက်မှုယူပတ်ပတ်လည်ကလူတိုင်းနှင့်အခမဲ့သင်ကနေအားလုံးသည်နာကျင်မှုကို။ တာဝန်များသူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆို။ ပထမရုပ်ပုံကို"စုံလင်သောလူတစ်ဦးသည်"သူ၏အိပ်မက်မက်နိုင်တဲ့အရာမဖြစ်သဘောပေါက်သောကြောင့်၊ဒါဟာဖြစ်နိုင်မဖြစ်လုံးဝနှိမ်နင်းပြီးစိတ်ကူး။ ဒါဟာအကြံဉာဏ်ဒီတော့လွယ်ကူသည်မဟုတ်ကောင်အထည်ဖေါ်ရန်၊ဒါပေမယ့်နားလည်ရန်အဘယ်သို့ပြုနိုင်ပါသည်ရိုးရိုးသားသားအတွက်လူတစ်ဦးမှတစ်မစ်ရှင်။ အဓိကအရာတစုံတခုရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးအသွင်အကြောင်းပြစ်မှကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းပြော။ သင်သည်လည်းအကြောင်းမေ့လျော့တတ်နှင့်ငြင်းဖို့အဆက်သွယ်ထင်ထင်ကြောင့်"သိမ်မွေ့သောမေးခွန်းများကို"အကြောင်းနည်းလမ်းနှင့်ဂိမ်းများ။"အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြည့်ဆည်းဖို့ထိုကဲ့သို့သောလူများမှတဆင့်အင်တာနက်ကနေ၊လူမှုမီဒီယာမှချိန်းတွေ့။ လူ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အသင့်ပရိုဖိုင်ရုပ်ပုံတစ်လျောက်ပတ်၏အလုပ်။ အောင်မြင်သောစာပိုဒ်တိုများလိုအပ်ဘက်အပြန်အလှန်၊ပူးတွဲ၊နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ပုံမှန်ဆက်သွယ်ရေး။ မဟုတ်ရှိသမျှတောင်းဆိုချက်ပါဝင်သည်သူလိုကိုဖြည့်ဆည်းရန်။ ဖန်တီးဤတမ်းပလိတ်ကိုမနိုင်လျှင်။ ယောက်ျားသည်၊အခြေအနေနှင့်အမျိုးသမီးသည်မိမိအလိုတော်မှာကြည့်ရှုယူအရည်မှတ်ဤရုပ္ရွင္ႏ။ သင်မှတ်မိဖို့ရှိသည်၊ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောစကားတစ်ခုနှင့်အတူ။ သငျသညျစကားပွောနိုငျတရုတ်အပျက်မပါဘဲအားဖြင့်ဤအကြောင်းပြောနေအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်၊တစ်ခါတစ်ရံအထိန်းဖြစ်လာသောသူလူ၊အတန်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးတစ်ချိန်တည်းမှာ။ ဒါဟာလည်းကြီးမားတဲ့အပေါင်းအနေအသုံးအနှုန်းများ၏အသိပညာ၊အရွှေ့အတူမင်္ဂလာလျှင်သင်နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်အားကြီးသောအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဒါဟာဖို့အရေးကြီးကြောင်းပြသသင့်အခြေအရေးမပါဘူး။ ခွင့်ပြုလူမှုရေးကွန်ရက်မှသင်ရှာရန်အဘို့အတွေ့ဆုံရန်အတူတူစားေလေ့ဖြစ်ထွက်လှည့်။ အဘို့အထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားရဲ့အစပျိုးသည်အမျိုးသမီး၊သီးသန့်အရောင်းအ။ အၿပံဳးကိုသူ့မျက်လုံးနှင့်မတုံ့ပြန်၊အမတ်သင်ချက်ချင်း။ လိုအပ်သောယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အစွမ်းထက်၏အရင်းအမြစ်စွမ်းအင်၊ဒါကြောင့်သင်ချက်ချင်း"ကောငျး"အလှအသံ၊အကွက်၏အကောင်းဆန့်။ အစည်းအဝေးအောင်မြင်နဲ့တူထွက်အလုပ်လုပ်အတွက်အားကစားရုံ၊ပင်လျှင်သင်အားလပ်ရက်အပေါ်နှင့်စည်းအဝေးနှင့်အတူတစ်ဦးဓာတ်လှေကား။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုဖုံးကွယ်သစ်တစ်ခုကိုကျွမ်းခြင်း၊အကျုံးဝင်သည့်အကြောင်းအရာလေး။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကိုအချိန်နှင့်အာကာသ၌ယုံကြည်ခြင်းရှုံးရသောအမှန်တရား။ ပင်လျှင်လုံးဝဝှက်ထားပြီးနောက်၊လက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့မဟုတ်ကွာရှင်းခြင်း၊အမွေး၏"လူပ်ိဳဘ"၏အကျွမ်းတဝင်။။။။။ ဒီမကြာခဏဝင်လက်အတွက်လက်ကိုအတူပုံမှန်ဆေးသို့မဟုတ်ကျူရှင်တော်တော်ခွဲစိတ်သူဘယ်လိုမှသင်ပြတတ်။ အရိုးရှင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ကိုစတင်ရန်။ ရုပ်ရှင်၊ပြပွဲများ၊ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ရေကူးကန်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအလေးအနက်လူအများအတွက်စိတ်အားထက်သန်ခြင်းနှင့်တူးဖော်သောပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ မနိုင်လျှင်အလှန်အတူလုံလောက်တဲ့အင်တာနက်ကတဆင့်၊ကျွမ်းအားဖြင့်၊ရောဂါ၊သို့မဟုတ်အားဖြင့်ဇာတ်ကောင်စရိုက်များ။ ပင်လျှင်ဖြတ်မဟုတ်တော်တော်၊မနိုင်ရှုပ်ထွေးတက်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာရှုပ်ထွေးသော၏အရုပ်ဆိုးသူအမျိုးသမီးစွန့်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊သူတို့ကပိုပြီးသိက္ခာပုံမှန်ထက်ထက်။ အပျက်အတွက်သင်နေ့စဉ်ရာမှအားအရုပ်ဆိုးလူ၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်း၊နှင့်လူမှုမီဒီယာအေဆာက္လုပ္အမ်ဳိးနိုင်လျှင်တဖြည်းဖြည်း၊သင်အတွင်းရိုက်နှက်သောသံတူသည်။ ဒါဟာအရေးမပါဘူးပုံ အခြေအသင့်ဖြစ်ပေးအပ်သည်။ ရှိပါတယ်အချို့တော်တော်"လှည့်ကွက်"လိုပဲ"မိခင်သင်လိုအပ်လုပ်တင်ထားသည်။"သူ့အဖြေ:"ဘာမှမ၊သင်ရှိသည်နိုင်ဒုတိယဇနီးတစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အမြှောင်။"ဆိုတဲ့အချက်ကိုမယုံကြည်သူတိုး၊သူလုပ်မ၊ဒါပေမယ့်ကြိုးစားပြီးဖြန့်ဖို့အချက်အလက်များဖျက်ဆီးဖို့။ မြင်လူမှုရေးအဖြစ်အနည်းငယ်အဖြစ်အပျက်ဖို့ကြိုးစားပါနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲကျ။ ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရန်အမျှမှုမရရှိခြင်းကိုဖော်ပြသင့်ရဲ့အမြင်၊ဒါပေမယ့်အတွက်တွေ့ဆုံရန်စကား၊နေ့လည်"ကျပန်း"ဒါကြောင့်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်အခမဲ့အဘို့အကြှနျုပျ၏စားသောက်ဆိုင်၊ကကမ်းလှမ်းအကြံပြုချက်များကင်ဆာ။ မှရရန်ကြိုးစားနေအတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ဦးအတွက်လူတစ်ဦး၏အိပ်မက်များ၏ညှဉ်းပန်းလည်းလွယ်ကူပါတယ်။ ခပ်သိမ်းသောအချိန်သင်တစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံ၊သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကသိမှရနိုင်မယ့်သူလွယ်ကူ၊နှင့်ရုတ်တရက်စိတ်ခဲသင်ရှာဖို့တစ်မိတ်ဆွေကောင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်ခင်ပွန်းကအတူအလုပ်လုပ်ရန်။.
Ruletti chat: Analoginen video chat
ဗီဒီယိုချက်တင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ တက်တွေ့ဆုံရန်အဘို့တစ်-အချိန် ဗီဒီချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့ တွေ့ဆုံရန်ဖို့အမျိုးသမီး အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယို ချိန်းတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့ သာ ကန့်သတ်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ဗီဒီယိုကလေးတွေအတွက်ပျော်စရာ အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုချက်တင်